mug dhigay Soosaarayaasha | Shiinaha bakeerigaaga dhigay qeybiyeyaasha & Factory
Dharka funaanadaha lagu tolo, 400ml mug lafaha shiinaha.
Burbadda shiinnada ee lafta wanaagsan leh oo leh funaanad tolmo leh oo ku habboon mugga, funaanadda la tolay waxay noqon kartaa midab iyo naqshad kasta. Ku habboon xilli dhan, gaar ahaan xilliga dayrta iyo xilliga qaboobaha. Mug wuxuu hayaa 400ml (biyo mug buuxa). Weyn ku filan cabitaankaaga maalinlaha ah ama shaaha iwm. DHAQAALAHA DUGSIGA SARE: Buugga waxaa lagu farsameeyaa shiino laf wanaagsan oo qaali ah oo la ansaxiyay si loo ilaaliyo nabadgelyadaada iyo maskaxdaada, LEAD-FREE, NON-TOXIC, jab u adkeysi leh oo adag. KU DHAQAN AH OO KU HELI KARO: Iyada oo leh mug mug leh, ...
Qaabka dhalaalka ee 'Glaze mug T' oo lagu qurxiyo gunta hoose ee dhoobada, 400ml mugga midabka midabbada dhalaalka midabka, banaanka dusha sare iyo gudaha dhalaalka dhalaalaya. Iyada oo qayb yar oo hoose ah oo qurxin u dhigma midab kala duwan.
450ML Glaze mug leh naqshad
Midab muraayad midab leh naqshad xariir ah, 450ml mug oo leh midabbada midab dhalaalaya, laba midab oo kala duwan oo ku yaal bannaanka.
MUUQDO daboolka bamboo
Mug toosan oo leh bamboo ama daboolka qoryaha lafa cusub, shiinaha ganaax ah, 400ml mug leh daboolka bamboo, mug ka baxsan midab dhalaalaya oo naqshad leh, ayaa u dhigmi kara qaaddo, Qaabka Naqshadeynta (Qaab 6 ama 4 ah) 4 ama 6 koob oo dabool leh bamboo, mug wuxuu hayaa 400ml (biyo mug ah oo buuxa). Weyn ku filan cabitaankaaga maalinlaha ah ama shaaha iwm. SHARAFTA SARE EE LAFAHA SARIIRKA SARE: Koobka waxaa lagu farsameeyaa shiinaha lafo cusub oo la ansixiyay oo aad u sarreeya oo loogu talagalay amnigaaga iyo nabadda maskaxdaada, LEAD-FREE, NON-TOXIC, chip-r ...
MUQDISHO NOOC AH
Bakeeriga naqshadda xayawaanka, isku qas oo ku dheji waxyaabo kala duwan iyo qaabab u eg mugga, sida mugga gaaban ee V-ga oo leh midab muraayad midab leh oo ku dhex yaal alaabada dhagaxa ah, sida muraayadaha tooska ah ee lafaha shiinaha ama dhagaxa dhagaxa leh oo leh midab dhalaalaya Waxaa loo tixgelin karaa sidii casho loo dhigay, shaah la dhigay. Waxyaabaha hadiyadaha ah, koob maalin kasta la isticmaalo
Mugs kala duwan
Mugyo kala duwan oo leh qaab kasta oo ku habboon mugga iyo naqshadeynta naqshadeynta, Naqshadeynta valentine-ka leh 12oz xabbadda xabbadda ee shiinaha lafta / shiinaha laf cusub. Naqshadeynta xarfaha salaanta ee xafladda ama dhalashada oo leh 12oz xabbad xabbad oo ku taal lafaha Shiinaha ama lafta shiinaha cusub. Naqshadeynta qaaska ah ee isku dhafan ee 9oz zsfk mug iwm
Taxanaha beerta dalka
Muuska la galiyay, shiinaha lafta cusub, mugga shiinaha lafihiisa wanaagsan, waxaa loo qaadan karaa inay tahay casho, shaah la dhigay, ubax leh balanbaalis, shimbiraha iwm kooxda beerta dalka Waxyaabaha hadiyadaha ah, koob maalin kasta la isticmaalo
IN-GLAZE DOLOR MUUQAALKA DIIDANKA XAYAWAANKA
T Shaag muggiis ah, laba weel caaryada, shiinaha lafaha cusub oo leh naqshad xayawaan dhalaalaya, ayaa loo qaadan karaa inay yihiin casho, shaah la dejiyey, deerada xoolaha, maroodiga, dameer, dawacada, shabeelka, iwm. Waxyaabaha hadiyadaha ah, koob maalin kasta la isticmaalo